I-Salty Seahorse - I-Cottage 1 (ilungele izilwane ezifuywayo)
Rockport, Texas, i-United States
Indlu encane ibungazwe ngu-Nicole
Ikotishi elihle lokudoba elitholakala kumamayela angu-3 ukusuka ebhishi/iklabhu ye-yacht kanye namamayela ayi-6 ukusuka edolobheni laseRockport. Jabulela izindawo zokudlela ze-eclectic, umphakathi wamaciko, noma ukudoba ethekwini/egulf. I-Cottage inikeza umbhede ogcwele ekamelweni lokulala elizimele, ikhishi eligcwele usayizi kanye nendawo yokuhlala enosofa ogoqeka ube ngumbhede ophelele. Ekuseni, jabulela inkomishi yekhofi emphemeni ngenkathi ubuka izilwane zasendle noma kusihlwa, basa umlilo emgodini womlilo futhi ujabulele ukushona kwelanga kumahektare angu-4 angasese.
Amahektha amane azimele anenqwaba yezilwane zasendle okufanele zibhekwe (sicela ungazondli izilwane zasendle). Ikotishi #2 linendawo encane yezilwane ezifuywayo ezingasetshenziswa etholakala ngemuva kwendlwana.
4.92(50 okushiwo abanye)
4.92 · 50 okushiwo abanye
I-Salty Seahorse, iKhabhinethi #2 itholakala kumamayela angu-26 ukuya edolobheni laseCorpus Christi lapho ungahlola khona i-Aquarium, i-Navy Battleship, nezinye izingosi zomlando.
Amamayela angu-35 ukuya esikhumulweni sezindiza esiseduze eCorpus Christi.
Isikebhe sasePort Aransas singamakhilomitha angu-12 ukusuka endlini encane. I-Port Aransas inikezela ngamabhishi amahle ongashayela kuwo, ukuphiknikhini kuwo, futhi ubhukude emanzini afudumele asegulf.
I-Rockport inikeza umphakathi wamaciko osaziwayo lapho abaculi bendawo bekhombisa izinto zabo ezithengiswayo. Kunemakethe yomlimi etholakala edolobheni lase-Rockport ngoMgqibelo wokuqala wenyanga zonke.
I-Rockport inhloko-dolobha yokudoba yaseTexas! Jabulela ukudoba echwebeni noma egulf.
Umnakekeli useCottage #2 futhi uyatholakala uma unemibuzo noma izidingo.